Ciyaaraha Epic waxay yiraahdaan waxay ka shaqeyneysaa sidii loo hagaajin lahaa waxqabadka Fortnite ee iOS | Wararka IPhone
Ciyaaraha Epic waxay sheeganayaan inay ka shaqeynayaan hagaajinta waxqabadka Fortnite ee iOS
Bilihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida Fortnite uu ugu jiro bushimaha qof walba, oo ay ku jiraan wararka, wanaag iyo gacan labadaba. Fortnite wuxuu ka shaqeeyaa aaladaha iOS ka bilaabma iPhone 6s iyo iPad Air 2, oo leh xoogaa shuruudo sare ah marka la barbar dhigo ciyaaro kale oo la mid ah, Battle Royale, sida kiiska PUBG uu yahay.
Laakiin sida cusbooneysiintu u timid, waxqabadka ciyaarta ayaa hoos u dhacay Hoos udhaca, taas oo ku qasabtay shirkada inay dhigto baytariyada ayna ku dhawaaqdo inay shaqeyneyso kadib markii ay heleen cabashooyin badan oo ay ku qoran tahay in ciyaartan aysan ficil ahaan lagu ciyaari karin iPhone iyo iPad.
Sida laga soo xigtay Epic, balastarka xallinaya dhibaatooyinkan waxqabadka horay ayaa loo diyaariyay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad u dirto App Store si aad sii wad inaad si rasmi ah u qaybiso. Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo ka dib, maalmo yar ka hor, inbadan ayaa noqday ciyaartoydii ka cawday dhibaatooyinka sida sawirada si liidata loo bixiyay iyo Marlon taasi waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in lagu raaxeysto kulankaan.
Lama oga dhibaatada ka dhalan karta waxyaabahaan Marlon marka ay timaado is dhexgalka ciyaarta laakiin waxay u badan tahay in Apple uusan qaadan doonin waqti dheer si uu dib ugu eego balastarka sababta oo ah muhiimadda kulankaan uu leeyahay App Store iyo tirada badan ee dakhli ah ee ay kuu soo saarayso.
Cayaartu waxay sameysay lacag aad u tiro badan oo loogu talagalay Epic iyo Apple labadaba, iyagoo isdulsaaraya in ka badan $ 100 milyan 90-ka maalmood ee ugu horreeya ee laga heli karo macruufka oo keliya, laakiin taasi waa qayb yar oo ka mid ah keega. Fortnite waxaa laga heli karaa dhamaan meheradaha suuqa, gabi ahaanba waa lacag la'aan waxayna na siineysaa nidaam lacag urursi ah oo aan wax faa'iido ah naga siinin ciyaartoyda kale. Waxa ugu muhiimsan ee ciyaartan waa xirfadda mid kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Ciyaaraha Epic waxay sheeganayaan inay ka shaqeynayaan hagaajinta waxqabadka Fortnite ee iOS
Kuwani waxay noqon karaan magacyada iPhone-ka soo socda